Lapho ebusika luphela, kanye Awakening of nature, umbono womuntu ozalelwe ezingqondweni wonke amantombazane ukuthi ihlobo uyeza maduze, futhi khilogremu, kukora loNyaka Omusha amaholide, ngakho kuphi futhi ungahlanganyeli. Sekuyisikhathi uthole phansi ibhizinisi! Indlela ukunciphisa umzimba ngaphandle ingozi? Zama ukuqonda.
Akubalulekile ukuba ulahlekelwe isisindo ngokushesha
Bonke labo wazibuza ukuthi ngendlela enempilo ukunciphisa umzimba, kudingeka ukuqapha ukudla kwabo. Kodwa asigcini ngokwakho kakhulu kule inani ukudla washisa noma kilojoule. I abukhali isisindo ukwehlisa (10% noma ngenyanga okwengeziwe ngomunye), kungenzeka ukuthola izifo mass, kusukela izinhlelo zokulawula emzimbeni ayikwazi aphendule izinguquko ezinjalo.
Jwayelekile kwesisindo ngenyanga ubhekwa 1-2 kg. Uma ungakwazi abaphonse, akudingekile ukuba ngiphikelele bese uqhubeke ukunciphisa umzimba. Ungakhohlwa ukuthi ukuncipha ngendlela ehluzekile. Kungcono ukuthatha ikhefu, hlalani khona futhi wenze umzimba ukujwayela isimo sakhe esisha.
Isizathu esikhulu isisindo okweqile - umzimba kancane kakhulu. ukusheshisa wakhe bethola ukubukeka esihle kanye umzimba onempilo. Gcizelela izinqubo umzimba emzimbeni kungenzeka esebenzisa cider uviniga. Ngaphambi zonke kokudla ukuze nje siyophuza omunye ingilazi yamanzi nge ziyoncibilika ke isipuni uviniga esilinganayo uju.
Uviniga ikhuthaza cleavage, kunciphisa esesuthi, iqukethe umsoco ezifana potassium kanye acid organic. Ngaphezu kwalokho, uviniga singasetshenziswa ngaphandle, bezihlikihla izindawo inkinga. It kuzonciphisa ivolumu futhi unike kuyaqina isikhumba.
Njengoba ngendlela enempilo ukunciphisa umzimba, ngokuqinisekile bayokwazi ukuthi oluhlaza abathandi itiye. Iqukethe izidakamizwa eyisimangaliso ka EGCG, noma catechin, ososayensi abathi ithuba ukulwa umdlavuza kanye nge-HIV. Yena ngenkuthalo kusiza kilojoule, ephakamisela isimiso sezinzwa somzimba womuntu.
Phuza amanzi amaningi
On umbuzo kanjani ukuba ulahlekelwe isisindo, izibuyekezo cishe yonke okufanayo: baphuze amanzi amaningi. Kungani lokhu kubaluleke kangaka?
Amanzi suppresses iphango kakhulu, futhi ngaleyo ndlela ungase udle kancane. Kunconywe imizuzu engu-40 ngaphambi kokudla ukuphuza ingilazi uketshezi efudumele. Aphinde asheshise lokugayeka kokudla ixhuma inqubo umzimba isivele zanqwabelana yamafutha amaningi emzimbeni. Amanzi igcwalisa umswakama ngokusebenzisa amangqamuzana esikhumba somuntu, abenze nokunwebeka iphinde ivimbele ukubukeka nisebancane imibimbi.
Nge nokuntuleka kwamanzi emzimbeni kwenzeka inqubo reverse, umzimba kubambezela futhi umzimba uqala buthelela fat. Ukuphelelwa amanzi emzimbeni kwenzeka, ukumosha izinwele, isikhumba kanye nezinzipho.
Ingabe kuyazuzisa ke ukuhlala Ukudla eqinile?
Uma udinga ukuba ulahlekelwe isisindo ngesikhathi, kuziwa ekudleni wokutakula. Okunjalo ngendlela okusheshayo ukunciphisa isisindo futhi inciphise aphatha ngazo abesifazane abaningi.
Ucwaningo lubonisa ukuthi iningi ubulili bubuhle usuzosidla amakhambi kuphela, yogurt amanzi, kunokuba ukuqonda izimiso eziyisisekelo ze okunomsoco nokuvakasha njalo iqembu labasubathi. Ngokuyinhloko, lokhu kungenxa yokungabi nesikhathi esanele sokuphumula.
Ochwepheshe bakholelwa ukuthi sinesandla esiqine kakhulu ukudla angeke nje abangele umonakalo ebalulekile empilweni, kodwa nayo futhi ungasizi. 20% kuphela abesifazane bayakwazi ukuba anciphise umzimba, ukudla nge sinokulinganiselwa okukhulu. Futhi, ngeshwa,% 5 kuphela ungagcina the impumelelo. Futhi indlela, ngaphandle umonakalo empilweni ukunciphisa umzimba ngosizo Ukudla okusheshayo?
esiqine kakhulu futhi yingozi isimo jikelele umzimba ubhekwa ukudla kunciphisa ikhalori eyanele ngaphezu kuka-40% kuyinsakavukela nsuku zonke.
Ukuze abale izidingo impilo yomzimba, udinga umzimba unamandla nesisindo somzimba samanje iphindwe amathathu. Futhi labo hambela njalo ejimini, isibalo okuholela kunconywa ukwengeza enye kilojoule 300.
Ngokuvamile, ngaphansi elawula Ukudla yi abalulekile lokuzuziwe 3 izinsuku zokuqala. Ngalesi sikhathi, umzimba eshiya uketshezi intercellular futhi asihlanze namathumbu. Instant neminye umphumela luyanda uma Ukudla iqukethe imikhiqizo isisu engayitholi elilinganiselwe usawoti kanye noshukela. Futhi lapho, intuthuko kubambezela kakhulu, kusukela komyanga umsoco umzimba is engasenamahloni, umzimba ifinyelela isimo ukucindezeleka.
Wonke umuntu ejwayelene yokuthi ngemva Ukudla nemikhawulo emikhulu abesifazane baqala ukudla nesigamu kuya izikhathi ezimbili eside, esiza alulame Kilos alahlekile.
Ngakho-ke, uma uyazibuza kanjani ngokushesha unciphise umzimba ngaphandle umonakalo, akudingekile ukuba ufunde uhlu ukudla nemikhawulo enkulu. A ukuqonda kangcono izimiso okunomsoco kanye Amazing asebenzayo.
Ukudla okunomsoco for kwesisindo
Ulahlekelwe isisindo ngaphandle asebenzise uhlu elukhuni imikhiqizo ogunyaziwe, ivolumu yabo namahora ethola usizo umsoco ofanele. Kungaba impendulo engcono umbuzo kanjani ngendlela enempilo ukunciphisa umzimba.
Imfihlo inhlanganisela ezinengqondo imikhiqizo ukuthi uyonika ophethe vivacity namandla usuku lonke, futhi ngesikhathi esifanayo akusho axazulule yamafutha amaningi emzimbeni.
Ukuze kuzuzwe Ukudla ephelele, udinga kuphela ukugcina 8 Imithetho Simple.
Yidla nezikhathi okungenani 3 ngosuku (kuhle 5-6). Musa udla, ukukhonza, kudliwa konke ngesikhathi esisodwa, kumele sihambisane entendeni yesandla sakho insaliwe.
ukudla Main - ibhulakufesi. Imikhiqizo matasa ngalesi sikhathi, kukhona kuphela replenishment umzimba amandla. ibhulakufesi Proper ulungisa lokugayeka kokudla emzimbeni ngoba angu-24 alandelayo, futhi normalizes amazinga kashukela egazini, okukuvumela ukuba uhlale usuku asebenzayo futhi asebenzayo zonke.
Kunesidingo isikhathi esinqunyiwe, kancane, ukuhlafuna ngokucophelela.
Awukwazi ukudla esimweni ukucindezeleka noma ngokomzwelo. Adrenaline kubamba umzimba ukumuncwa kilojoule zonke hamba "zigciniwe."
Ngakho, lapho isidlo sokugcina kufanele kube kungakapheli amahora 3 ngaphambi sokulala.
A ukusetshenziswa omkhulu wamanzi - omunye izisekelo umsoco ofanele. Umzimba onempilo idinga ukuncela amalitha okungenani kabili ngosuku.
Kunesidingo ukubambezela. Gcwalisa isikhala ukuza imizuzu okungenani 20 ngemuva kokuqala ukudla. Ngakho musa ukusheshe hhayi udla kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukudla ezokuhlafunwa kahle kahle othulini futhi wetted ngamathe emlonyeni, egqugquzela ukuhlukaniswa carbohydrate.
It is cishe aluqede ngokuphelele ushukela. I ngokweqile kwalo mkhiqizo emzimbeni kwephula ukugaya bese kuholela ukubuyisa.
Ukudla Rinad Minvaleeva
I theory kanye umkhuba yokudla ukudla okunempilo evezwe izincwadi zakhe Rinad Minvaleev. Unciphise umzimba ngaphandle umonakalo ngangokunokwenzeka, asesebenzisa ukudla imijikelezo wezinsuku ezintathu. Izinsuku zokuqala ezimbili umjikelezo ngamunye, ukudla kufanele kube okufanayo njengoba ngaso sonke isikhathi. Nokho, kumelwe balahle sweet kanye notshwala. Ngosuku lwesithathu lomjikelezo ikhalori eyanele kufanele kuyehla kube sezingeni eliphansi. I ukudla ukuthatha ephansi fat imikhiqizo kuphela yobisi, izithelo kanye nemifino. Qiniseka ukuthi ukuphuza amanzi amaningi.
Uhlelo isekelwe enkolelweni ukuphamba umzimba futhi kubangele ukuba ijubane inqubo umzimba. Ngosuku olulodwa, okukhawulelwe umzimba akanayo isikhathi ukuba sijwayele imodi okusindisa nekucala ngenkuthalo ulahlekelwe isisindo. Ngenxa yokuthi ithola ukudla lukaKhisimusi kuye ezinsukwini ezizayo lomjikelezo, ukuthengisela izakhi ebalulekile empilweni ugcwele.
Lapho ukudla Rinad Minvaleeva Kunconywa ukuba ahileleke kakhulu ezemidlalo ngoba ngosuku lokuqala ngamunye umjikelezo wezinsuku ezintathu. It oyenza isebenze umzimba futhi ikuvumela ukuba uqhubeke inqubo kwesisindo kanye ngosuku lwesibili, lapho umzimba imahhala futhi imithwalo ezemidlalo, nokunikezwa elinganiselwe.
Lolu hlelo ikuvumela ukuba balahle 3 kg izinsuku 9-12.
"Amakhowe" amakhukhi. Amakhukhi ekhaya "Amakhowe": iresiphi ngesithombe